रंगशालाको विवाद मिल्यो, स्थानीयबासीले गरे आत्मालोचना – DK
Home / खेलकुद / रंगशालाको विवाद मिल्यो, स्थानीयबासीले गरे आत्मालोचना
By digitalkhabar on June 2, 2019
१९ जेठ, चितवन । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेको धर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन र स्थानीयबीच सहमति भएको छ । सहमति लगतै भरतपुर महानगरको पहलमा स्थानीयबासीले भत्काएको बार उठाउन थालेका छन् ।
रंगशालाको पश्चिम क्षेत्रमा बाटोलाई लिएर विवाद भएको थियो । हाल त्यहाँ ७ मिटरको बाटो छ । रंगशाला निर्माण भएपछि ३१ मिटरको बाटो बन्दा आफ्नो उठिबास हुने भन्दै स्थानीयबासीले अहिले नै जग्गा छुट्याउन माग गरेका थिए । तर, फाउन्डेशनले यसबारे आफूले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै डीपीआर आएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिए । त्यही विवादमा स्थानीयबासीको समूहले जोडर लगाएका थिए ।
फाउन्डेशन का अध्यक्ष सिताराम कट्टेलकै उपस्थितिमा भएको भएको बैठकमा स्थानीय अगुवाहरुले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आत्मालोचना गरेका छन् । साथै भत्काएको बार स्थानीय टोल सुधार समिति र स्थानीयको पहलमा पुर्ननिर्माण गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा चितवनका अध्यक्ष यमवहादुर परियार र कांग्रेस चितवनका सचिव राजीव न्यौपाने लगायतले रंगशाला निर्माणमा सहयोग रहने बताए । कार्यक्रममा सिताराम कट्टेल धुर्मुसले रंगशालाका बिषयमा आफूले कुनै गलत र बनावटी कुरा नगरेको बताए । उनले भने, ‘रंगशालामा भएको घटनाका बिषयमा मैले कुनै बनावटी र गलत कुरा बोलेको छैन, यदि कसैले प्रमाणित गर्छ भने म नजिकै रहेको रुखमा झुण्डिएर मर्न तयार छु ।’
विदेशमा पसिना बगाएका नेपालीहरुले गाँस कटाएर दिएको रकमले लगाएको जस्तामा डोजर लगाउँदा भक्कानो छुटेको उनले बताए । ‘यो पीडा र दुःख कि त मैले महसुस गरेको छु कि त विदेशमा पसिना बगाउनेहरुले गरेका छन्’ उनले भने, ‘आखिर उनीहरुले रंगशाला बनाउन किन पैसा दिए । यहिको विकासका लागि होयन र ? खै त यहाँका स्थानीयले कुरा बुझेको ? मसँग कुनै स्वार्थ छैन, न म भ्रष्टचार गर्न आएको हुँ, न कमिसन खान ।’रंगशाला निर्माणपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित यहीका जनता हुने भन्दै उनले सहयोगका लागि अपील गरे । धुर्मुसले बाटोको मुद्धा फाउन्डेशनले भन्दा भरतपुर महानगरपालिकाले पहल गरेर मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
Related ItemsBusinessCricketDigital KhabarNepalStadium
← Previous Story विश्वकप क्रिकेट : दक्षिण अफ्रिका र बंगलादेश भिड्दै
Next Story → अमेरिकी भिसामा कडाइ, सामाजिक सञ्जालको विवरण पेश गर्नुपर्ने